यो एथेन्सका बच्चाहरूको शिक्षा थियो Absolut यात्रा
हरेक पटक हामी यसमा हेर्नुहोस् क्लासिक ग्रीस हामी अनिवार्य रूपमा तुलना र बिचको बिच पाउन एथेन्स र स्पार्टा। शिक्षामा पनि यो नै हो: एथेन्स शिक्षा विरुद्ध la स्पार्टन शिक्षा.
दुई शहर-राज्य बीच ठूलो भिन्नताहरु थिए। स्पार्टा युवाको शिक्षा, भनिन्छ एगो, दौडियो राज्यको प्रभारी. यसको एक मात्र उद्देश्य भनेको भविष्यका सिपाहीको रूपमा बच्चाहरूलाई प्रशिक्षण दिनु थियो। तथापि, एथेन्समा शिक्षा निजी थियो र उसको विश्वव्यापी दर्शन थियो, यद्यपि प्रत्येक शिक्षकका अनुसार मतभेद हुन सक्छ। कुनै पनि मामला मा सामान्य विचार केटाकेटीहरु आफ्नो शरीर र आफ्नो बुद्धि दुबै खेती थियो। निम्न अनुच्छेदहरूमा हामी किन यो दृष्टिकोणको व्याख्या गर्नेछौं।
सबै भन्दा पहिले यो याद गर्नु पर्छ केवल बच्चाहरूसँग यस शिक्षामा पहुँच थियो। ती केटीहरूलाई घरमा सुताइएको थियो, जहाँ तिनीहरूलाई स्त्रीरोगको महिलाले सिकाएको थियो। लक्ष्य यी युवा एथेन्सवासीहरूको लागि वयस्क जीवनमा राम्रो आमाहरू र गृहिणी बन्ने थियो। सानो भिन्नता बाहेक, यो सबै ग्रीक शहरहरूमा सामान्य थियो।
1.1 एथेन्स शिक्षाको चरण
2 सोफिस्टहरू र एथेन्स शिक्षा
शास्त्रीय एथेन्सको शैक्षिक प्रणाली को रूपमा चिनिन्थ्यो पाइडिया। सामान्यतया भन्ने हो भने यस शिक्षाको लक्ष्य पुरुष बच्चाहरूलाई उच्च नैतिक राज्य प्राप्त गर्न सक्षम बनाउनु थियो। अधिक व्यावहारिक तहमा, यो लक्ष्य थियो कि समाजले राम्ररी तयार मानिसहरुलाई राजनैतिक र सैनिक बोझ काँधमा पुर्याउनु पर्छ जुन तिनीहरूले वयस्क अवस्थामा नागरिकको रूपमा सामना गर्नुपर्नेछ।
सुकरातले एथेन्सका कुलीन मानिसका धेरै युवाहरूलाई शिक्षित गरे जबसम्म उनलाई युवा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मृत्युदण्ड सुनाईएन।
Paideia को आत्मा चार स्तम्भहरूमा आधारित थियो o कालाकोगथिया:
व्यक्तिगत हेरचाह र व्यायाम को माध्यम बाट शारीरिक सौन्दर्य।
नैतिक मर्यादा, खराबीबाट राम्रो छुट्याउन।
ज्ञान, ज्ञानको माध्यमबाट प्राप्त।
हिम्मत, अघिल्लो तीन राम्रोसँग प्रयोग गर्नको लागि एक अत्यावश्यक गुण।
सात बर्षको उमेर सम्म, केटाहरू र केटीहरूले आधारभूत शिक्षा साझा गरे, मूल्यहरूको श्रृंखला र व्यवहारका मोडेलहरू जुन नन्नीहरू र उनीहरूको हेरचाहको जिम्मामा रहेका दासहरूले मौखिक परम्परा मार्फत सानालाई हस्तान्तरण गर्‍यो: मिथक, कविता, होमिक, कथाहरू नायक, आदि को। धनी परिवारहरूको एउटा संस्कृत दास थियो pedagogue, जुन यी कार्यहरूको प्रभारी हुन्थ्यो।
एथेन्स शिक्षाको चरण
La अलगाव यो सात वर्षको उमेर पुग्दा उत्पादन गरिएको थियो। त्यसोभए केटाहरूले सार्वजनिक स्कूल वा मा उनीहरूको प्रारम्भिक यात्रा सुरु गरे didakaaleo। त्यहाँ व्याकरणकर्मी यसले तिनीहरूलाई गणितको आधारभूत अवधारणामा परिचय गराउनुका साथै पढ्न र लेख्न पनि सिकायो। विद्यार्थीहरू बेंचमा बसे र उनीहरूको होमवर्क गर्न मोम बोर्डहरू र पपाइरी प्रयोग गरे। शारीरिक सजाय सामान्य थियो र राम्रोसँग सम्मान गरिएको थियो। सबै चरणमा अवस्थित संगीत प्रशिक्षण, एक मूल विषय थियो। यस विषयमा प्रभारी शिक्षकलाई चिनिन्थ्यो किथारिस्ट्स.
१२ बर्षको उमेरदेखि बच्चाहरूले खेल खेल्न शुरू गरे: कुश्ती, जम्पिing, रेसि,, थ्रोइ,, पौडी खेल्ने ... बच्चाहरूले धेरै घण्टा बिताए जिम, तर तिनीहरू पनि खुला हावा मा धेरै व्यायाम अभ्यास, सधैं पूरै ना naked्गो र को देखरेख मा payotribes। खेलकुदको महत्त्व यति धेरै थियो कि समय बित्दै जाँदा दर्शनका विद्यालयहरू पनि चिनिन थाले जिमहरू.
जब उनीहरू १ 18 वर्षको उमेरमा पुगे, युवाहरू एफबेस बन्न पुगे। को एफेबिया यो दुई वर्षसम्म चलेको थियो र युवा एथेन्सवासीहरूको गठनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण थियो। यस अवधिमा, तिनीहरूलाई युद्ध कला (सैन्य प्रशिक्षण) मा प्रशिक्षित र जिम्मेवार नागरिक, राम्रो वक्ता, र प्रभावकारी सार्वजनिक प्रबन्धक बन्न सिकाइएको थियो।
१ th औं शताब्दीमा एरिजोटल (शिक्षक) र अलेक्ज्याण्डर (विद्यार्थी)।
धनी परिवारका युवाहरूले प्रतिष्ठित दार्शनिकहरू र शिक्षकहरूको हातमा २१ वर्षको उमेर भन्दा पर आफ्नो शिक्षा विस्तार गरे। एक चर्चित केस केटा को हो अलेक्जेंडर ठूलो छ, जसको एथेन्समा शिक्षा धेरै द्वारा गरिएको थियो Aristotle.
एथेन्स शिक्षाको एक विवादास्पद पक्ष (र सामान्यमा ग्रीक शिक्षाको) उनीहरूको विकासको प्रवृत्ति थियो एक वयस्क शिक्षक र एक किशोर विद्यार्थी बीचको घनिष्ठ सम्बन्ध। कहिलेकाँही यी सम्बन्धहरूले स्पष्ट रूपमा यौन पक्ष पनि लिए, जुन सामाजिक रूपले स्वीकार गरियो।
सोफिस्टहरू र एथेन्स शिक्षा
खेल, सैन्य कला र स to्गीतको अलावा एथेन्सका केटाकेटी र युवाहरूको शिक्षामा त्यहाँ केही खास विषय वा विषयहरू थिए जुन पोलिसका भावी नागरिकहरूको गठनको लागि विशेष महत्त्वको थियो। यी विषयहरू द्वारा सिकाइएको थियो सोफिस्टहरू एफेबिया चरण पछि उच्च शिक्षाको विकल्प रोज्ने विद्यार्थीहरूलाई।
सोफिस्टहरू को थिए? सामान्यतया सामान्य उच्च शिक्षा शिक्षकहरू। उनका शिक्षाहरू एक निश्चित लक्ष्यतिर केन्द्रित थिए: शिक्षित र प्रख्यात वक्ताहरूको गठन। यी गुणहरू राजनीतिक जीवनमा सफल हुनको लागि आवश्यक थियो, जहाँ धेरै निर्णयहरू वक्ताहरूको क्षमतामा निर्भर थिए जुन नागरिकहरूलाई एउटा विचार वा अर्कोको विश्वास दिलाउँदछ।
यो लक्ष्य निम्न विषयहरूमा विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण दिएर हासिल गरिएको थियो:
डायलेक्टिक्स, "छलफल को कला" को रूपमा पनि चिनिन्छ। शिक्षकहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई दुई वटा भाषणहरू सिकाएर उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिए जसमा एउटा विचार र विपरितलाई बचाइएको थियो।
गणित, विषय जुन अन्य चीजहरूमा गणित, ज्यामिति, सद्भाव र खगोल विज्ञानमा सामेल छ।
बयान, "बोल्ने कला।" शब्दहरू मार्फत श्रोताहरूलाई मनाउने क्षमतामा लीसलाई निर्देशन दिइएको थियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » एथेन्सका बच्चाहरूको शिक्षा
यो मेरो लागि धेरै छ !!!
तपाईलाई धेरै धन्यवाद !! ♥♥♥
मारिया पाउला भन्यो
यो राम्रो छ !! .. धेरै धेरै धन्यवाद !!! 😀
मारिया पाउलालाई जवाफ दिनुहोस्
यो एक पुच्छर को लागी तिनीहरू giles फिट hahahahaha
संयुक्त राज्य अमेरिकामा शीर्ष १० शपिंग मल्लहरू